अन्तर्वार्ता – agrimnepal
राजा महेन्द्रले भन्थे–अब युवाहरुले देश बनाउने हो
डा. कृष्णजंग राणा–वरिष्ठ चिकित्सक, लामो समय मलेरिया रोगको विशेषज्ञकारुपमा स्वदेश तथा विदेशमा चिनिएका डा. कृष्णजंग राणा (८९) नेपालगञ्जमा जन्मिए । उनको बाल्यकाल त्यहीँ बित्यो । उनको प्रारम्भिक पढाइलेखाइ पनि नेपालगञ्जकै सरकारी स्कुलमा भयो । कुराकानीका क्रममा उनले आफूले भाग्यलाई तीन भागमा बाँड्ने गरेको बताए । एउटा जन्मभाग्य, अर्को कर्मभाग्य र तेस्रो भाग्यभाग्य । भाग्यभाग्य भनेको […]
गगन थापा भन्छन्- महाधिवेशनमा परिआए सभापति उठ्छु
कांग्रेस महामन्त्रीमा युवा नेताद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश अर्माले दाबी गरेका छन्। महाधिवेशन आउन डेढ -दुई वर्ष बाँकी छँदै कांग्रेसमा नेतृत्वको जोडघटाउ सुरु भएको छ। नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित गगन थापाको अन्तर्वाताको सारसंक्षेपः नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको पुनः आगमन होला? सामान्य प्रयासमा कांग्रेसको पुनः आगमन सम्भव छैन। नेतृत्व कर्मकाण्डी छ। विगतमा जे गरिरहेको थियो, त्यही नै गर्ने […]
म्याग्दीको अन्नपूर्ण नगरपालिका अन्तर्गत नान्गी गाउँमा जन्मिनु भएका महावीर पुन माध्यमिक शिक्षा चितवनबाट प्राप्त गरी उच्च शिक्षाको लागि अमेरिका नाव्रेस्का विश्वविद्यालय पुग्नुभयो । अमेरिकाबाट आफ्नै घरगाउँमा केही गर्न फर्किएपछि शिक्षा, स्वास्थ, सञ्चारलगायत धेरै क्षेत्रमा समाज परिवर्तन गर्न सक्षम रहे । समाज परिवर्तनलाई पहिचान गरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधिबाट सम्मानित भए । म्यागासेसेजस्तो उच्च पुरस्कारबाट […]